Gbasara anyị - Eurborn Co., Ltd.
Anyị bụ ndị:
Eurborn bụ naanị onye nrụpụta China nke ewepụtara maka nyocha, mmepe na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara dị n’èzí n’okpuru ala na ọkụ mmiri. N'adịghị ka ndị ọzọ na-eweta ngwaahịa nke na-eme ọtụtụ ụdị oriọna, anyị ga-elekwasị anya n'ihi ọnọdụ siri ike nke na-ama ngwaahịa anyị aka. Ngwaahịa anyị ga-enwerịrị ike ịnara ọnọdụ ndị a ma rụọ ọfụma n'agbanyeghị nsogbu ahụ. Yabụ, anyị ga-agba mbọ ọ bụla iji hụ na ngwaahịa anyị ga-eju afọ.
Anyị ga-esi ike na nkọwa. Ndị asọmpi anyị bụ akara ama ama n’ụwa niile. Yabụ, anyị ga-adakọrịrị kacha mma na ngwaahịa anyị ka ọ dị n'ụkpụrụ ha. Agbanyeghị, anyị adabaghị na ọnụahịa ha. Nke a bụ ntinye anyị nye ndị ahịa anyị, ngwaahịa dị oke ọnụ ahịa.
Ntak emi Họrọ Anyị:
1: Anyị R & D otu nwere ihe karịrị afọ 20 nke n'èzí ụkpụrụ ụlọ ọkụ ahụmahụ. N'ịzaghachi ihe ndị ahịa anyị chọrọ, anyị ngwa ngwa na n'ụzọ zuru ezu mezue ODM, OEM imewe, na-enye ọkachamara oru nkwado iji kwekọọ na-atụ anya.
2: Anyị nwere arụ ụlọ anyị na-akpụ. Ọ dịghị ka ndị ọzọ na-eweta ngwaahịa nke na-ebupụ ma ọ bụ ndị ọzọ.
3: Enweghị MOQ maka ọtụtụ ihe igwe anaghị agba nchara.
4: Anyị na-enye ọnụ ahịa ụlọ nrụnye ozugbo.
5: Anyị na-agbaso usoro nyocha nke mba ụwa na nyocha ọrụ mmekọrịta ọha na eze.
6: Anyị na-eme nyocha 100% na nyocha maka ịka nká, IP (waterproof, dustproof) na ihe.
7: Anyị nwere asambodo patent ngwaahịa.
8. Anyị bụ ndị OA, ROHS, ISO9001 asambodo.
2020 bu afo kachasi sie ike. Iji nyeghachi ọha mmadụ na ndị ahịa anyị, Eurborn na-agba mbọ kacha mma iji nyere onye ọ bụla aka. Anyị nyere anyị nnukwu ọgwụ mmanya na ihe nkpuchi. N'agbanyeghị ụdị nsogbu ọ bụla, anyị ga-ahọrọ ibuso gị ọgụ ọnụ.